रहस्य - प्रेम पुन मगर | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना कथा / लघुकथा लघुकथा रहस्य – प्रेम पुन मगर
on: जेष्ठ २६ , २०७८ बुधबार- १२:२०
काठमाडौंमा सडक, चौर, गल्ली, जताततै देखिने ठुलासाना आकारका साँढेहरू अचानक कता हराए ? लक्ष्मीनारायणको प्रश्नले म बिगत सम्झन बाध्य भएँ।
दुई हजार छप्पन्नताका जब म चक्रपथको सडक छेउमा कतै गइरहेको थिएँ । जोरदार साइरनको साथमा अगाडि पछाडि नेपाल प्रहरीको जीप बिचमा खोई कुन कम्पनीको निलो रंगको गाडी हुइँकिएको थियो । सडकको एकदम बिचमा ठुलो साँढे (वसाहा) ले बाटो रोकेर अवरोध गरेको थियो । त्यो गाडी युवराज दिपेन्द्रको थियो । तत्कालीन समयमा युवराज नेपाल खेलकुद संघका सभापति या अध्यक्ष यस्तै केही थिए। त्यसको पछिल्ला केही पछिल्ला सालतिर पनि ती साँढेहरु जताततै भेटिएकै हुन्। खोई कहाँ गए ती साँढेहरु लक्ष्मीनारायणको प्रश्नको उत्तर मसँग थिएन।
आमा र गाई समान मानिने हाम्रो देशमा गाई ,गोरु, साँढेहरु थुप्रै थिए।आजभोलि कुन्नि कहाँ गए? हामी दुबैको प्रश्नमा होटेल मालिक मिस्टर चुहाङ्ले भन्यो। “रातिको समयमा बागमती पुलमुनि मारिए। कोही ड्राईमीटमा अन्य देश निर्यात भए। कोही यहीका पाँचयारे होटलमा महंगो सूप बनेर बिक्री भए।”
गजल – अलख निरन्जन लोहार